Wiil Local ku tilmaamay Muuse bixii oo xabsi Culus lagu xukumay – Marqaanmedia24.com
April 16, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 1
Wararka naga soo gaaraya Magalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in Maxkamada Magaladaas ay Maanta xukun ku riday Maxamed Keyse Bigeeye oo Bartiisa Facebook ku dhaliilay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
Xeer Ilaalinta Maxkamada Magalada Hargeysa ayaa Maxamed Keyse Bigeeye waxa ay ku eedeysay in Bartiisa Facebook uu ku soo qoray Erayo ay ka mid ahaayeen,Muuse Biixi waa Local,taas oo sababtay in Xasbiga la dhigo.
Mudo ayaa la sheegay in uu Maxamed Keyse Bigeeye ku jiray Xasbiga Hargeysa,waxana Maanta lahokeenay Maxkamada,iyada oo Maanta lagu Xukumay Sanad iyo Lix Bilood.
Maxamed Keyse Bigeeye ayaa hadda kahor loo xiray in uu Buug ka qoray Waxqabadka Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Buugaas oo uu ugu magacdaray(Tusaalaha Guusha)
Sikastaba xukunka Xabsiga ah ee Maanta lagu riday Maxamed Keyse Bigeeye ayaa daba socda Xukun Saddex Sano ah oo shalay lagu riday Abwaanad Naciimo Abwaan Qorane oo lagu eedeyey in ay ku dhaqaaqday fal lidi ku ah qaranimada Soomaaliland.
DEG DEG ciidamo Boobay Qalabkii Imaraad Muqdisho
Marka ugu horreeya “Somaliland” ma aha dal mise dagal rasmi u jira ee dunida laga aqoonsan yahay. Sidaasi aawadeed ayuunan Muuse Biixi u ahaan karin “madaxweyne” sababta oo ah dal mise dagal uu hoggaan rasmi ah ka yahay ma jiro asalka hore ba. Waxaa markaasi xaqiiqadu ay tahay in haddii uu inankani ka dhashay qabiilka Isaaq uu noqonayo wiil uu oday isla Isaaqooda ah ee aan se lahayn wax mansab ah uu xaq darro u xidhay. Haddii uu wiilku qolo kale ka dhashay na uu noqonayo mid uu oday Isaaq ah ee aan wax mansab ah lahayni uu xaq darro u xidhay.
Haddii uu Isaaq yahay reerka uu ka dhashay iyo juffadiisa ayaa godob weyn laga galay. Haddii uu qolo kale yahay na qabiilkiisa iyo reerkiisa ayaa godob weyn laga galay. Xaajadu sidan weeye marka loo tiigsado Shareecada Islaamka iyo Xeer Dhaqameedka Soomaaliyeed iyo isla markaasi na Sharciyada, Qawaaniinta iyo Xeerarka Dawliga ee Caalamiga. Su’aashu waxaa weeye in la helayo qareenno qaabkan saxda ah ee aan soo sharraxay xaajada u qaabilaya oo maxkamadaha adduunka ula tiigsan kara kooxdan maafiyada ah ee shacabka Soomaaliyeed ee geyigaasi ku nool argigixisada iyo shuftanimada kula dhaqmaysa.